Ezi zizinto ezidibeneyo zokudibanisa iifemu zefashoni | IBezzia
Ezi ziindwangu zokudibana zeefemu ezinzileyo zefashoni
UMaria vazquez | 17/07/2021 10:00 | Ukuhlaziywa ukuba 27/08/2021 11:55 | fashion
Ngakumbi nangakumbi kuthi sinikela ingqalelo kuloo nto uzinzo umqondo siva kakhulu namhlanje. Umbono owamkelwa ziifemu zefashoni kodwa ezingasoloko zizalisekiswa kuwo onke amanqaku aphambili ekuyigcineni: iimeko ezifanelekileyo zokusebenzela abasebenzi, imveliso yasekhaya kunye nokusetyenziswa kwamalaphu azinzileyo.
Ngokuphathelele amalaphu amanyene neenkampani zefashoni ezinzileyo kukho mpikiswano yonke. Sithanda ukucinga ukuba amalaphu endalo ahlala ezinzile kwaye ngokuchaseneyo, awenziwayo awakho. Kodwa ayisiyiyo yonke into emnyama okanye emhlophe. Siyakumema ukuba wazi ezona zidumileyo, ezinokubhaptizwa njengezinzileyo ngaphandle kokungonami.
1 Umqhaphu we-Organic kunye no-recycled
2 Ifilakisi yendalo
4 Tencel, lyoncell, cupro, imodyuli ...
Umqhaphu we-Organic kunye no-recycled
Umqhaphu yenye yamalaphu asetyenziswa kakhulu kushishino lwempahla eyolukiweyo. Imele, enyanisweni, phantse isiqingatha sohlobo olusetyenzisiweyo kolu shishino. Nangona kunjalo, sesinye sezityalo esidinga amanzi amaninzi kunye neekhemikhali. Oku akunjalo ngekotoni yendalo, ethi Imvelaphi yayo ikulimo lwezinto eziphilayo.
Ezi zityalo ze-agrochemicals, phakathi kwazo i-pesticides kunye ne-herbicides zinokubakho okukhulu, ziyasuswa kwisityalo somqhaphu esivela kwinkqubo yemveliso. Umqhaphu onokuchonga umbulelo kuwo Isatifikethi seGOTS (uMgangatho weLaphu leMpahla yeHlabathi), eqinisekisa, kwelinye icala, ukukhathalela okusingqongileyo kulo lonke unikezelo lwempahla eyolukiweyo yendalo, kwaye kwelinye, ukuthobela iikhrayitheriya zentlalo.
Kodwa ayisiyiyo kuphela indlela ezinzileyo. Umqhaphu ohlaziyiweyo ovela kwi Inkunkuma yasemva komzi mveliso kunye nasemva komthengi, lilaphu elizinzileyo nelinembeko kuzo zonke iinkqubo zalo. Kwaye ineempawu ezifanayo nekotoni.
Iflakisi, ukulinywa kwayo kubuyela kwi-Egypt yamandulo (inkulungwane yesine ye-BC), lusinga lwendalo olufuna ubuncinci bamanzi kunye neyeza lokubulala izitshabalalisi kulimo lwalo. Iveliswe ngesiqu seflakisi okanye kwilinesi (iLinum usitatissimum), iyi- ifayibha yendalo (xa ingadyobhekanga ngeekhemikhali), ezinzileyo kunye nezinto ezahlukeneyo. Iyaxatyiswa kakhulu ehlotyeni, nangona ikhululekile ukushwabana, kuba ihambisa imvakalelo yokutsha.
Yenziwe nge Isityalo se-Cannabis, I-hemp lilaphu elithambileyo (ethambe ngakumbi xa uyihlamba) uhlala uthelekiswa nelinen. Isityalo asidingi manzi maninzi ukuze silinywe kwaye amayeza okubulala izitshabalalisi ayimfuneko ekukhuleni kakuhle, ngenxa yoko kuthathwa njengenye indlela ezinzileyo. Ukuxhathisa, kusinceda ukuba sihlale sifudumele ebusika kwaye kupholile ehlotyeni.
Tencel, lyoncell, cupro, imodyuli ...
Zonke ziyimicu yemvelaphi yendalo yenziwa ngumntu. Zithathwa njengezizinzileyo kuba zinyangwa ngamachiza kwiisekethi ezivaliweyo. Ngale ndlela, isisombululo -amanzi- anokuphinda asetyenziswe kamva kwezinye izinto, ukunciphisa inkunkuma eyingozi.
I-Tencel okanye i-lyocell yintsinga eyenziweyo eyenziwe kwi umgubo wokhuni kwimithi yezolimo ezinzileyo. Ngenxa yokuthintelwa kwayo kunye nobunzima bayo bokukhanya, yinto efanelekileyo yokwenza iimpahla. Inokuphefumla okuhle okwenza ukuba ibe lilaphu elifanelekileyo kulawulo lwebacteria. Iimpawu ezifanayo ziyafumaneka kwi-cupro okanye kwilaphu leemodyuli, nazo ezivela kwiselulosi.
IPiñatex sisikhumba semifuno esenziwe ipayinapile intsalela yamagqabi ashiyekileyo. Kungokwemvelo, okuzinzileyo, kunye nokukhethwa kwe-vegan kwesikhumba. Kwaye kuba yenziwe ngemveliso yokutya, iyanciphisa inkunkuma. Ukhetho olukhula njengogwebu.
Unokumangaliswa kukungafumani apha amalaphu eplastiki aphinda asetyenziswa. Ngaphakathi kolu hlobo lwelaphu sinemvelaphi eyahlukeneyo: iibhotile zeplastiki, iminatha yokuloba, inkunkuma yeplastiki elwandle, njl. Banegalelo, ewe, ukusebenzisa ezi ntsalela kodwa ekupheleni kobomi babo bathatha ixesha elide ukuthoba isidima, ke emva kokukucinga siye sabona kufanelekile ukuba singazibandakanyi.
Ngaba uyazi ukuba onke la malaphu amanyene neenkampani zefashoni ezinzileyo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » fashion » Ezi ziindwangu zokudibana zeefemu ezinzileyo zefashoni
Ukuhlamba ilanga ukhulelwe: ewe okanye hayi?